Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 09:11
သူ သက်သတ်လွတ်စားတာ ဘာသာရေးအယူအဆ၊ ဘာအယူအဆတွေထက်
တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို သနားလို့ မစားတာတဲ့။ ကျန်တာ ဘာမှ မမျှော်လင့်ဘူးတဲ့။
ဟုတ်ပါတယ် အနှောင်ကင်းကင်းနဲ. လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ကျေးဇူးပါ မအိမ့်။
17 June 2007 at 01:09
“လူ.အခွင့်အရေး” ဆိုတဲ့စကားကိုတောင်မှ “ချိုးဖောက်မှု” ဆိုတဲ့ စကားနဲ.တွဲ၍ ကြားဖူးသည်
လူတွေရဲ. အခွင့်အရေးတောင် ဘယ်နေမှန်း မသိတဲ့ ဒေသမှာ ကျွန်မက တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ. အခွင့်အရေး အကြောင်းပြောမိရင် လူရယ်စရာဖြစ်ကုန်တော့မည်။ "
သတ်သတ်လွတ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တခါမှ ဒီလိုမတွေးဖူးဘူး ... သိပ်ကောင်းတဲ့ အတွေးပဲဗျာ ... ကျေးဇူး မပုံရိပ် ...
ဟုတ်တယ် အမ။ တကယ်တော့ တရိစ္ဆာန်လေးတွေကို မစားတော့ မစားချင်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အပင်ဆိုက်လို့ မရတဲ့ ဒေသရောက်ပြန်တော့လည်း အသားကို စားရတာပါပဲ။ စားမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်မှာပါ။။လူ့ဆင်ချေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဒေါ် သတ်သက်လွတ် စားတာ ခုထိပါပဲ။ သူနေတာ ယိုးဒယားမှာဆိုတော့လည်း အသီအရွက်ကပေါ်များပါပေတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးပါ။
လာဖတ်သြွး တာကျေးဇူးပါ ကိုမင်းမင်း။
29 June 2007 at 10:29
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုပဲ စားလိုက်တာပဲ … ကျွန်တော်ကတော့ သတ်သတ်လွတ် စားတာမစားတာထက် ကိုယ်ကမသတ်မိဖို့က ပိုအရေးကြီးမယ်ထင်တယ် (သတ်ဖို့အားမပေးတာလည်းပါတယ်) … ဘာအသား ကိုစားရမှ ဘာအရွက်ကိုစားရမှ မဟုတ်ဘူး၊ စားစရာဆို တော်တော်များများစားတာပဲ… ဘာကိုမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာကိုတောင် တော်တော်စဉ်းစားရတယ်…
လူတွေရဲ. အခွင့်အရေးတောင် ဘယ်နေမှန်း မသိတဲ့ ဒေသမှာ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အခွင့်အရေး အကြောင်းပြောမိရင် လူရယ်စရာဖြစ်ကုန်တော့မည် ဆိုတဲ့စကား အကြိုက်ဆုံးဘဲ...